लकडाउन छल्दै सनसिटीमा अर्थमन्त्री : ५ः१३ मा इन, ५ः५५ मा आउट ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/लकडाउन छल्दै सनसिटीमा अर्थमन्त्री : ५ः१३ मा इन, ५ः५५ मा आउट !
लकडाउन छल्दै सनसिटीमा अर्थमन्त्री : ५ः१३ मा इन, ५ः५५ मा आउट !
कोरोनाभाइरस संक्र`मित फेला परेको काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्ट मेन्टमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि पुगेको खुलासा भएको छ । अपार्ट मेन्टका सदस्य समेत रहेका कलाकार पुष्कर रेग्मीले अर्थमन्त्री खतिवडा सनसिटी अपार्ट मेन्टमा चैत ११ गते गएको दाबी गरेका हुन् । प्राइम टाइम टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘हामीले सत्य बोल्नुपर्छ, ढाँट्नुहुदैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडा चैत ११ गते अपार्ट मेन्टमा आउनुभएको हो । गार्ड कमाण्डर लोकेन्द्रले राखेको रेकर्डमा पनि अर्थमन्त्री आएको देखिन्छ ।’चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन लागु हुने घोषणा गरेको थियो । तर मन्त्री खतिवडा लकडाउनकै बेला उक्त अपार्टमेन्टमा पुगेको पाइएको हो । सो अपार्टमेन्टमा ब स्ने एकै परिवारका दुई जनालाई कोरोना संक्र`मण भएको पुष्टि भैसकेको छ ।
यापिड टेस्टका क्रममा एकै परिवारका तीन जनामा कोरोना संक्र`मण भेटिएपछि केन्द्रीय प्रयोगशालामा भएको थप परीक्षणमा दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । अहिले उक्त अपार्टमेन्टलाई सिलबन्दी गरिएको छ भने अपार्ट मेन्टमा रहेका सबैको कोभिड–१९ परीक्षण गरिदैछ । -यापिड टेष्टमा पोजिटिभ आएका तीनै जनालाई सोमबारै पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
उक्त अपार्ट मेन्टमा भीआइपीहरुको समेत बसोबास छ । उक्त अपार्टमेन्टमा कलाकार रेग्मीका साथै बिनिता हमाल, मोनिका दाहाल, काँग्रेस नेता रमेश रिजाल, नेता भीम न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, टुक हमाल, ऋषिकेष गौतम न्यायाधीश विमलप्रसाद ढुङ्गेल लगायत भिआइपीहरु पनि बस्ने गर्छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरा तिलक खतिवडासमेत सोही अपा र्टमेन्टमाम बस्ने गर्छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका परिवारले सो अपार्टमेन्टमा २ वटा फ्ल्याट लिएका छन् ।
चैत ८ गते उक्त अपार्टमेन्टमा वेल फेयर सोसाइटीको चुनाव भएको थियो । सो चुनावमा तिलक सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । छोरा तिलक निर्वाचित भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा समेत बधाई दिन अपार्टमेन्ट पुगेका हुन् । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले भने यो विषयमा अहिलेसम्म केही बताएका छैनन् ।
निर्दयी सरकारको उदण्ड सिपाही !
गृह मन्त्रा`लयले भन्यो- उपत्यका छाड्न दिने निर्णय भएको छैन, हल्लाकोको पछि नलागौ !
फेरी काभ्रेका दुई युवामा कोरोना संक्र`मण देखियो